बोटोक्स के हो ? - विशेष - नारी
बोटोक्स के हो ?
भ्याम्पायार फेसियल (मुखमा मात्र) हलिउडमा धेरै चलेको फेसियल हो । एउटा मेसिन हुन्छ, जसमा प्लेट लेस सेल छुट्टिन्छ । प्लेटलेस कोषिका छुट्टिएपछि फेसियल मसाज गर्छन् । आफ्नै शरीरको रगतले फेसियल नेचुरल हुन्छ ।
बोटोक्स अथवा बोटुलिनम सुई चाउरीपनको संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी उपचार हो । बोटोक्स स–साना सुईहरूबाट चाउरी परेको भागमा दिइन्छ । नदुख्ने क्रिम लगाएर गरिने यो उपचार विधिलाई लन्च टाइम प्रोसिजर पनि भनिन्छ । लन्च टाइम प्रोसिजर अर्थात् खाजा खाने छोटो ब्रेकमा गर्न भ्याउने उपचार भन्ने बुझिन्छ । बोटक्स गर्न १५ देखि २० मिनेट समय लाग्छ । सुईको दाग वा खत नबस्ने भएकाले यो उपचार गराएको अरुले प्राय: थाहा पाउँदैनन् । खाजा खाने ब्रेकमा बोटक्स उपचार लिँदा पनि काममा अवरोध आउँदैन ।
डा. जेविना लामाले आफ्नो क्लिनिकमा यो थेरापीका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै बढी आउने बताइन् । त्यसमा पनि धेरैजसो बैंकरहरू राम्रो र योंग लुक्स देखिनका लागि भ्याम्पायर फेसियल गराउन आउने बताइन् । उनका अनुसार बैंकर भएपछि स्मार्ट र ब्युटिफुल लुक्समा देखिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले नै प्राय: बैंकरहरू पीआरपी थेरापीका लागि खर्च गर्छन् । वर्षमा दुई पटक गर्नुपर्ने यो फेसियल गर्नुअघि सबै ब्लड टेस्ट गराउनुपर्छ । ब्लड टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र यो फेसियल सुरु गर्नुपर्छ ।